တရုတ်ကွန်ပျူတာအအေးခံခြင်း Solutions, ကွန်ပျူတာများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ, ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသည်အရည်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်
ဖေါ်ပြချက်:pc အအေးခံခြင်းဖြေရှင်းနည်း,ကွန်ပျူတာများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ,ကွန်ပျူတာသည်အရည်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်,အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်သည်ရေခဲသေတ္တာ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ > အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်သည်ရေခဲသေတ္တာ
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်သည်ရေခဲသေတ္တာ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, pc အအေးခံခြင်းဖြေရှင်းနည်း, ကွန်ပျူတာများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ကွန်ပျူတာသည်အရည်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အကြီးစားကွန်ပျူတာများအတွက် Dielectric Coating အေးနစ်မြုပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကွန်ပျူတာများအတွက် Enviromental Friendly Dielectric Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကြီးစား Computer ကို Host ကအဘို့အဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်အေး TUWF-47  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Computer ကို ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက် Eco-friendly Dielectric Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကြီးစား Computer ကို Host ကအတှကျအနိမျ့အဆိပ်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကြီးစား Computer ကို Host ကအဘို့အမြင့်တည်ငြိမ်ရေးဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နယူးဓာတုကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက်အေးနစ်မြုပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက်အရည် Coating ရေခဲသေတ္တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အကြီးစားကွန်ပျူတာများအတွက် Dielectric Coating အေးနစ်မြုပ် အရည်ကွန်ပျူတာအအေးဆုံးအအေးဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးအအေး - တစ်ကောင်းတဲ့အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်စဉ်းစား 70F ရာသီဥတု 70F ရေထဲမှာနေတဲ့အေးခဲနေသောရေကူးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ရေအရမ်းအေးပါသလဲ...
ကွန်ပျူတာများအတွက် Enviromental Friendly Dielectric Coating ဓာတုအမည်: Perfluorohexene0င်များ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေရှိသည် ODP တန်ဖိုးနှင့်အလွန်အမင်းနိမ့် GWP တန်ဖိုးကို အလတ်စားစီးရီးအေး Fluorocarbon, သောက Non-မီးလောင်လွယ်အရည်တ္ထုများ၏ကြင်နာများမှာ...
အကြီးစား Computer ကို Host ကအဘို့အဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်အေး TUWF-47 အရည်ကွန်ပျူတာအအေးဆုံးအအေးဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးအအေး - တစ်ကောင်းတဲ့အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်စဉ်းစား 70F ရာသီဥတု 70F ရေထဲမှာနေတဲ့အေးခဲနေသောရေကူးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။...
Computer ကို ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက် Eco-friendly Dielectric Coating အရည်ကွန်ပျူတာအအေးဆုံးအအေးဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးအအေး - တစ်ကောင်းတဲ့အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်စဉ်းစား 70F ရာသီဥတု 70F ရေထဲမှာနေတဲ့အေးခဲနေသောရေကူးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။...
အကြီးစား Computer ကို Host ကအတှကျအနိမျ့အဆိပ်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် ဖလိုရင်းအရည်ပျော်ပစ္စည်းစီးရီး, အရာ Eco-friendly, Non-ပေါက်ကွဲအရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။ စံပြဓာတုအာဂွန်,...
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား ဓာတုအမည်: Perfluorohexene ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ, 40KV အထက်အလွန်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့2doesn`t အောက်က dielectric...
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ ဓာတုအမည်: Perfluorohexene ဖလိုရင်းရေခဲသေတ္တာစီးရီး, အရာ Nontoxic အရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။...
အကြီးစား Computer ကို Host ကအဘို့အမြင့်တည်ငြိမ်ရေးဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် ကြီးမားတဲ့ကွန်ပျူတာခန်းထဲမှာ fluorocarbon အရည်များ၏လျှောက်လွှာကိုမလိုအပ်ပါဘူး အပူလွန်ကျူးဘို့လေအေးပေးစက်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါဓာတု...
နယူးဓာတုကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက်အေးနစ်မြုပ် ယင်းဆာဗာ၏တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူအရည်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်: အကျိုးရှိစွာနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာ သောစွမ်းအင်ကိုပိုမိုထက် 95% ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ ရိုးရှင်းသောကိရိယာများ: ဆာဗာ 3000 kW...
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက်အရည် Coating ရေခဲသေတ္တာ ဓာတုအမည်: Perfluorohexene Fluorocarbon ပစ္စည်းစီးရီးအရည်အသှငျအပွငျ, ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက်ရေခဲသေတ္တာများမှာ မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်သည်ရေခဲသေတ္တာ ပေးသွင်း
အပူကြီးမားတဲ့ကွန်ပျူတာအခန်း၏အိမ်ရှင်စက်ငျ့သှားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? 1. အပူလွန်ကျူးဘို့ပရိတ်သတ်တွေများအသုံးပြုမှုဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအဆင့်နှင့်မြင့်မားသောပြင်ပအပူချိန်အလွန်ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောစက်ကအခန်းဧရိယာအဖြစ်လေအေးပေးစက်, အလွန်ကြီးမားသည်မဟုတ်, ကိုယ့်စျေးကွက်အပေါ်တစ်ဦးအိမ်မှာလေအေးပေးစက် install 2. Install လုပ်ပါ။ အာကာသဧရိယာကြီးမားသည်ဆိုလျှင်, ဗဟိုလေအေးပေးစက်ကိုတပ်ဆင်ပါ။ 3. ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းများနေ့စွဲထဲကဖြစ်ကြသည်။ ယခုငါတို့ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်အအေး, အရည်-ဓာတ်ငွေ့-အရည်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ချွေတာရေး၏ဖလိုရင်းအရည်အတွက်ဗတ္တိဇံ, စက်မှအပူလွန်ကျူးပစ္စည်းကိရိယာများကို install ၏လမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ သင်ဤဝယ်လိုအားရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
pc အအေးခံခြင်းဖြေရှင်းနည်း ကွန်ပျူတာများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ ကွန်ပျူတာသည်အရည်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်သည်ရေခဲသေတ္တာ ရေအအေးခံခြင်းသို့မဟုတ်အရည်